Iindaba - Indima yomatshini wokuzalisa initrogen engamanzi ekuzaliseni initrogen engamanzi kwiimveliso ezinkonkxiweyo
Initrogen yolwelo ithuthwa isuka kwitanki yokugcina inayitrojeni engamanzi isiwe kwisahlukanisi solwelo lwegesi ngombhobho wokufunxa ophakamileyo kakhulu. I-nitrogen ye-gas-liquid yesigaba sesibini ihlulwe ngokusebenzayo nge-gas-liquid separator, kwaye igesi kunye ne-nitrogen zikhutshwa ngokuzenzekelayo ukunciphisa ukuhluthwa koxinzelelo lwe-nitrogen engamanzi. I-gas-liquid separator Emva kokuba i-nitrogen engamanzi ngaphakathi ihlanjululwe, i-nitrogen engamanzi yahlulwe kwi-nitrogen yegesi, kunye ne-nitrogen ecocekileyo yolwelo ifakwe kumatshini we-nitrogen. Inqanaba le-liquid ye-gas-liquid separator lilawulwa ngokuzenzekelayo ukuze kuqinisekiswe ukuba inqanaba le-nitrogen engamanzi kunye nentloko yoxinzelelo lwe-static zihlala zihlala njalo, ukuqinisekisa ukuba umatshini wokuzalisa i-nitrogen engamanzi awuchatshazelwa kukuguquguquka koxinzelelo xa utofa initrogen, kunye nokuzinza kwenitrogen. I-injection ichaphazeleka, kwaye ixabiso le-CPK kwibhotile lichaphazelekayo.
Indima yomatshini wokuzalisa initrogen engamanzi ekuzaliseni initrogen engamanzi kwiimveliso ezinkonkxiweyo:
Emva kokuba ukuzaliswa kugqitywe kwaye ngaphambi kokungena kwi-cap, iteknoloji yokuzalisa i-nitrogen ye-liquid yanamhlanje isetyenziselwa ngokuchanekileyo kunye nobungakanani behla i-nitrogen engamanzi kwi--196 ° C, kwaye ngoko nangoko itywine i-nitrogen engamanzi. Initrogen engamanzi ifunxa ubushushu ngexesha elifutshane ize iguqukele ekubeni yinitrogen enegesi. , Umthamo ukwandisa amaxesha angama-700.
1. Uxinzelelo lwangaphakathi lwenziwa kwi-can / ibhotile, ekulula ukuyibamba, kwaye yandisa ukuvakalelwa kwesandla. Ayiyi kuvelisa ibhotile edilikileyo emva kokupholisa, kwaye ayiyi kuphazamiseka ngexesha lokupakishwa, ukupakisha kunye nokuphatha.
2. Qhuba umoya (ingakumbi i-oksijini) kwi-can / ibhotile, ukwenzela ukuba i-shelf life yemveliso ide kwaye i-taste ingcono.
3. Iitoti ze-aluminium azilula ukugqwala kwaye zifanelekile kwifriji.
Inkqubo yokufakwa kwenitrogen elulwelo:
Ulungelelwaniso olusisiseko lwezixhobo eziphambili: itanki yokugcina initrogen elulwelo, i-ultra-high vacuum multi-layer kunye ne-multi-screen insulated umbhobho wokuthutha ulwelo we-cryogenic (umbhobho wokufunxa ngokufutshane), ISAHLUKO SESIGABA, umatshini wokutofa initrogen, kunye nenkqubo yolawulo oluzenzekelayo.